Ihe ise anyị na-amụta n’okwukwe Josef na ekeresimesi | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Disemba 12, 2020
Ọhụụ nwata m nwere banyere ekeresimesi mara mma, dị ọcha ma dịkwa ụtọ. Echetaram na papa rida na wara wara ulo uka na uka ekeresimesi bu “Anyi Ndi Eze ato”. Enwekwara m ọhụụ disinik nke kamel, rue mgbe m gara na nke ruru unyi, site na nhọrọ ya. Mgbe ụfọdụ, ọ na-atụfu unyi ya na ntụziaka nke ndị nkiri. Ọhụụ ịhụnanya m banyere ụlọ anụ na njem nke ndị amamihe atọ ahụ furu efu.
Agaghị bụ echiche nwata na Christmas mbụ bụ ọ allụ na udo maka ndị isi agwa. Mary na Joseph nwere ọtụtụ mmetụta na ihe ịma aka nke gụnyere aghụghọ, egwu na owu ọmụma. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, Ekeresimesi izizi na-enye ọtụtụ ndị olileanya n’ezie ụwa dabara adaba bụ ndị ekeresimesi ha adabaghị n’ihe ọdịbendị na-emeghị eme.
Otutu n’ime anyi maara Meri. Josef kwesịkwara ileru ya anya. Ka anyị leba anya n’ihe ise a kụziiri anyị n’ihe gbasara okwukwe Josef n’oge Krismas mbụ ahụ.
1. Site n'okwukwe, Josef gosipụtara obiọma n'okpuru nrụgide
“Otú a ka a mụrụ Jizọs Kraịst. Eka esie, Maria, ama ododop ediomi ye Joseph. Ma tupu alụmdi na nwunye ahụ emee, mgbe ọ ka na-amaghị nwoke, ọ tụụrụ ime site n'ike nke Mmụọ Nsọ. Josef, onye ya na ya kwere nkwa, bụ onye ezi omume, ọ chọghị ịkparị ya n’ihu ọha, n’ihi ya, o kpebiri ịgbachi alụlụ ahụ n’obi nkịtị ”(Matiu 1: 18-19)
Obiọma na ntinye onwe ha na-agakọ. N’ezie, Ilu gwara anyi na ndi ezi omume na-akwanyekwara anumanu ha ugwu (P ro 12:10). Omenala anyi n’enweghi obi oma. Okwu mkparị na soshal midia na-egosi na ndị kwere ekwe na-eweda ndị kwere ekwe ibe ha ala. Ihe nlereanya nke obiọma nke Josef pụrụ ịkụziri anyị ọtụtụ ihe banyere okwukwe mgbe ihe na-akụda mmụọ.
Site n’echiche mmadụ, Josef nwere ikike iwe iwe. Onye chọrọ ịlụ ya hapụrụ obodo ya na mberede ruo ọnwa atọ ma lọta ọnwa atọ! Akụkọ ya banyere ileta mmụọ ozi ma ka bụ onye na-amaghị nwoke ma ọ dị ime ga-eme ka ọ gbanwee obi ya.
Olee otú o si bụrụ onye a ghọgburu n'ụzọ dị njọ banyere àgwà Meri? Oleekwa ihe mere ọ ga-eji mezuo akụkọ na-atọ ọchị banyere ọbịbịa mmụọ ozi iji kpuchie aghụghọ ya?
Ihere nke iwu akwadoghị soro Jizọs na ndụ ya niile (John 8: 41). N'etiti obodo anyi nwere umengwụ, anyi enweghi ike inabata ihe ihere a na-eme na omenala Meri. Akwụkwọ ndị e dere ihe na-erughị otu narị afọ gara aga na-enye echiche nke ihere na nsonaazụ nke omume ezighi ezi. Akwụkwọ ozi mkpagha zuru oke iji wezuga nwanyị na ọha gụrụ akwụkwọ na igbochi alụmdi na nwunye kwesịrị nsọpụrụ.
Dịka iwu Moses si kwuo, a ga-atụ onye ọ bụla ikpe ịkwa iko ebubo na nkume (Lev. 20:10). Na "Onyinye a na-apụghị ịkọwa akọwa", Richard Exley na-akọwa ụzọ atọ nke alụmdi na nwunye ndị Juu na nkwa njikọ nke njikọ aka. Nke mbụ bụ nkwekọrịta, nkwekọrịta nke ndị òtù ezinụlọ kwuru. Mgbe ahụ nkwekọrịta ahụ bịara, "nkwupụta ihu ọha nke nkwa ahụ". Dị ka Exley si kwuo, “n'oge a, a na-ewere di na nwunye dị ka di na nwunye, ọ bụ ezie na alụghị di na nwunye. Nanị ụzọ njikọ nwere ike isi kwụsị bụ site n'ọnwụ ma ọ bụ ịgba alụkwaghịm ... '
“Oge ikpeazu bụ ezigbo alụmdi na nwunye, mgbe nwoke ahụ na-alụ nwanyị ọhụrụ kpọrọ nwunye ya nwunye ya n’ime ụlọ nke nwanyị, wee mechie alụmdi na nwunye ahụ. Ihe agbamakwụkwọ agbamakwụkwọ na-esochi “.
Ọ dịbeghị mgbe a mụrụ nwa agbọghọ na-amaghị nwoke. Da adi sɛ na Yosef nni adwene a Maria wɔ ho. Ma, okwukwe Josef mere ka ọ na-egosi obiọma ma mgbe obi jọrọ ya njọ. Ọ họọrọ ịgbachi ya alụkwaghịm ma chebe ya ka ọ bụrụ ihere ọha na eze.
Joseph ama anam n̄kpọ nte Christ ke ini enye akanamde akpanikọ. Obi oma na amara na-emeghe ka mmebi iwu chegharịa ma laghachikwuru Chineke na ndi nke ya. N'ebe Josef nọ, o meghị ka aha Meri kwụsị, naanị ihe ọ ga-eme bụ inwe obi abụọ banyere akụkọ Meri. Ọ akwa ụta ọ bụla banyere ụzọ o si mee ihe banyere okwu ahụ.
Obi ọma Josef gosipụtara n'ebe Meri nọ - mgbe ọ kwenyere na ọ raara ya nye - na-egosi obiọma nke okwukwe na-arụpụta ọbụlagodi nrụgide (Ndị Galetia 5:22).
2. Site n'okwukwe, Josef gosipụtara obi ike
"Ma mgbe ọ tụlesịrị nke a, mmụọ ozi nke Onyenwe anyị pụtara ìhè n'ihu ya na nrọ wee sị, 'Josef, nwa Devid, atụla egwu ịkpọrọ Meri laa n'ụlọ gị ka ọ bụrụ nwunye gị, n'ihi na ihe a tụụrụ ime ya sitere na Mmụọ Nsọ' ' (Mat. 1:20).
Gịnị mere ụjọ ji tụwa Josef? Azịza doro anya bụ na ụjọ na-atụ ya na Meri tinyere aka ma ọ bụ na ya na nwoke ọzọ nọ, na ọ na-eme omume rụrụ arụ na ọ bụghị onye ọ kwenyere na ya bụ. Ebe ọ bụ na ọ nụghị ihe Chineke kwuru n’oge ahụ, oleezi otú ọ ga-esi kwere Meri? Olee otú ọ ga-esi tụkwasị ya obi? Kedu ka nwa nwoke nwoke ga-esi zụlite?
Mmụọ ozi ahụ kwụsịrị ụjọ a. E nweghị nwoke ọzọ. Meri gwara ya eziokwu. Ọ na-ebu Ọkpara Chineke.
Echere m na ụjọ ndị ọzọ kpasuru Josef iwe. Meri dị ime ọnwa atọ n'oge a. Nara ya dị ka nwunye ya mere ka o yie omume rụrụ arụ. Mmetụta dị a wouldaa ka nke a ga-enwe n'ọnọdụ ya n'etiti ndị Juu? Ọrụ ịkwa nkà ya ọ ga-ata ahụhụ? A ga-achụpụ ha n'ụlọ nzukọ ma hapụ ndị ezinụlọ na ndị enyi wee jụ ha?
Ma, mgbe Josef matara na nke a bụ nzube Chineke maka ya, nchegbu ndị ọzọ niile kwụsịrị. Ọ hapụrụ ụjọ ya n'akụkụ wee jiri okwukwe soro Chineke. Josef agọnarịghị ihe ịma aka ndị dị na ya, kama o ji okwukwe obi ike nara atụmatụ Chineke.
Mgbe anyị matara ma kwere na Chineke, anyị onwe anyị kwa ga-enweta obi ike iji tụọ egwu anyị wee soro ya.
3. Site n’okwukwe Josef natara nduzi na mkpughe
"Ọ ga-amụ nwa nwoke, ị ga-agụ ya Jizọs, n'ihi na ọ ga-azọpụta ndị ya na mmehie ha" (Matthew 1: 21).
Mgbe ha lawara, mmụọ ozi Chineke bịakwutere Josef ná nrọ. Ọ sịrị ya: “Bilie, kpọrọ nwa ahụ na nne ya gbaga Ijipt. Nọrọ n’ebe ahụ ruo mgbe m ga-agwa gị, n’ihi na Herọd ga-achọ nwatakịrị ahụ ka ọ gbuo ya ”(Matiu 2:13).
Mgbe ụjọ na-atụ m n’ihi na amaghị m ihe m ga-eme eme, ncheta otu Chineke si mesoo Josef na-eme ka obi sie m ike. N’oge a niile, Chineke dọrọ Josef aka ná ntị ma duzie ya. Akwụkwọ Nsọ na-ekwu na Chineke ka na-enye nghọta maka ndị na-eso Ya na-eje ije (John 16: 13) ma na-eduzi ụzọ anyị (P ro 16: 9).
Wayszọ Chineke na-eme ka m nọrọ ná mgbagwoju anya. Ọ bụrụ na m duziri ihe ndị mere n’oge ekeresimesi mbụ, agaara m ezere oke esemokwu na nghọtahie dị n’etiti Meri na Josef site n’iziga mmụọ ozi ahụ na Josef tupu ya ezute Meri. Aga m adọ ya aka na ntị banyere mkpa ọ dị ha ịgbapụ tupu ha apụọ abalị. Ma uzo nile nke Chineke adighi nkem - ha ka nma (As 55: 9). Ya mere na oge ya. Chineke zigara Josef nduzi dị ya mkpa mgbe ọ chọrọ, ọ bụghị tupu mgbe ahụ. Ọ ga-emekwa m otu ihe ahụ.
4. Ọ bụ okwukwe ka Josef ji rubere Chineke isi
"Mgbe Josef tetara, ọ mere ihe mmụọ ozi nke Onyenwe anyị nyere ya n'iwu ma kpọlata Meri n'ụlọ ka ọ bụrụ nwunye ya" (Matiu 1:24).
Joseph gosiri nrubeisi nke okwukwe. Mmụọ ozi gwara ya okwu ugboro atọ ná nrọ, ọ rubere isi ozugbo. Nzaghachi ya ngwa ngwa pụtara ịgbaga, ikekwe n'ụkwụ, hapụ ihe ha na-enweghị ike iburu wee bido n'ọnọdụ ọhụrụ (Luk 2:13). Otu onye okwukwe pere mpe nwere ike chere ka a rụchaa ya ma kwụọ ya ụgwọ ọrụ ịkwa nkà ọ na-arụ.
Irube isi Josef gosipụtara gosiri na o nwere obi ike n’amamihe Chineke na ndokwa o mere maka ihe a na-amaghị ama.
5. Ọ bụ okwukwe ka Josef ji were ndụ ya dum
Ma ọ buru na aka-ya erughi ego, ọ g carrywere kwa nduru abua ma-ọbu umu-kpalakwukwu abua, otù iji chu àjà-nsure-ọku, ibe-ya ka ọ buru àjà-nmehie. Na monhwɛ yiye na obi amfa nyansapɛ ne nnaadaa hunu a ɛnam nnipa atetesɛm ne nneyɛe so ”(Leviticus 12: 8).
"Ha chụkwara otu àjà dịka ihe Onyenwe anyị chọrọ: 'nduru nduru abụọ ma ọ bụ ụmụ kpalakwukwu abụọ'" (Luk 2:24).
N'oge ekeresimesi, anyị, ọkachasị ndị nne na nna na nne na nna ochie, achọghị ka ndị anyị hụrụ n'anya nwee nkụda mmụọ ma ọ bụ maka ndị enyi ha. Nke a nwere ike ịkwali anyị imefu ego karịa ka anyị kwesịrị. Obi dị m ụtọ na akụkọ Krismas gosiri na Josef dị umeala n’obi. Na úgwù nke Jisos - otu Ọkpara Chineke - Meri na Josef enyeghi nwa aturu, kama ha diri obere ego nduru ma obu nduru. Charles Ryrie na-ekwu na Bible Ryrie Study na nke a na-egosi ịda ogbenye nke ezinụlọ.
Mgbe a nwara anyị ọnwụnwa imeghachi omume, nwee mwute maka onwe anyị, gbuo oge nrube isi, ma ọ bụ megharịa onwe anyị nke ukwuu n'oge a, ka ihe atụ Josef wusie okwukwe anyị ike iji obi ike na Onye Nzọpụta anyị biri na ya.